qorshayaasha telegraam ICO - Blockchain News
Telegraam qorshaynaysa multi-bilyan oo dollar ICO for cryptocurrency chat
xawaaladaha Fariin lo telegraam ayaa qorshaynaysa in ay bilowdo oo ay madal blockchain iyo cryptocurrency hooyo, laadyo lacagaha on app chat iyo wixii ka dambeeya. Sida laga soo xigtay ilo kala duwan oo la hadlay TechCrunch, ah "telegraam Open Network" (ton) noqon doonaa cusub a, 'Qarnigooda saddexaad' blockchain la awoodo ka xoogbadan,, ka dib markii Seeraar iyo, ka dib, Ethereum ay jidka u bannaysay.
Daah laga maalgelin doonaa iyadoo weyn Bilowga quful qurbaan, la socda gaarka ah pre-iibka bilowda galay boqolaal malaayiin, kara waxaa ka mid ah ICOs ugu weyn taariikhda samaynta. Baahida la eryay by xaqiiqada ah in halkii ICO ka xawaaladaha cusub soo socda, Telegraam waa madal si fiican loo aasaasay Fariin laga isticmaalo dunida.
Qabatinka cryptocurrency argagxisada ku siin karaan telegraam ee nidaamka bixinta xornimada u weyn oo ka socda dawladda ama bangiga - wax Co-aasaha iyo agaasimaha Pavel Durov la og yahay in wax damcin ka dib markii maal-wareegay in uu shirkadda ee la soo dhaafay, network bulshada Ruush VK. Durov kama ay soo jawaabin TechCrunch ayaa dhowr jeer isku dayay in ay isaga soo xiriir ku saabsan sheeko this.
ka iman kara ee cryptocurrency ah gudaha app a fariimaha si weyn loo qaatay waa weyn.
Iyada oo lacagta cryptocurrency shaqeeya gudaha telegraam, users arkayna laga yaabaa ajuurada xawaaladaha marka lacag u diraysay xuduudaha caalamiga ah, guurto wadaraha lacag si gaar ah mahad encryption app ee, samatabbixin micropayments in la kulmeyso lahaa mid aad u sareeya qarashka credit card, iyo in ka badan. Telegraam horeba waa Qolyihii channel xidhiidhka beesha caalamka cryptocurrency ah, samaynta guriga dabiici ah in ay qadaadiic iyo Blockchain.
Iibinta tan ah ee cryptocurrency
Telegraam la fahamsan yahay inuu la fiirsaneysa inay kor u sida ugu badan ee $500 million ee sale pre-ICO ee wadarta qiimaha a iman kara calaamo kala duwan ee $3 bilyan $5 billion. Si kastaba ha ahaatee, tirooyinka kuwa ay isbedeli karaan ka hor inta ICO ah, kaas oo iman kara sida March sida ugu dhakhsaha badan. tirooyinka kuwa ka dhigi lahaa waxaa suurto gal crypto ugu weyn ee gaarka loo leeyahay kicin taariikhda ka dib markii Tezos, taas oo abuurtay in ka badan $230 million ee July.
A-sale pre in ICO ah waa cap yar maalgelinta (mararka qaar la dhimis) in uu soo jiito maal-weyn ('Nibiriyada badda') ka hor inta uusan iib ballaaran calaamo in ay maal-tafaariiqda. dadweynaha, wajiga tafaariiqda ee ICO ah u egtahay in ay kor u yar sababtoo ah waxaa jira dabada dheer ee dadka maal idiina yar. Laakiin hore-loading ICO la maalgashiga hay'adaha dhiiri kalsooni maal-tafaariiqda.
Kuwa maal-pre-sale yaabaa in loo baahdo in meel ugu yaraan iibsan-in ka mid ah $20 million hadii ay tahay meel ka baxsan goobada gudaha Durov ee. Ilaha ayaa sheegaya in ICO u baahan doontaa lacagta Fiat dhabta ah sida doolarka Maraykanka for iibsan-in, ma Seeraar ama Ceter sida kuwa kale ICOs u leeyihiin in ay taariikhda.
-Tier Top shirkadaha maalgashiga hay'adaha ayaa soo bandhigtay xiisaha, laakiin Durov la sheegay in ay ka digtoonaadaan of aqbalin in lacag caddaan ah. Mid ka mid ah shirkad lagu xamanayaa in ay riixay qoondeynta pre-sale waa Mail.Ru Group (hore DST), aasaasay by emigre Ruush Yuri Milner. Afhayeen u hadlay DST kama soo jawaabin our baaritaan ku saabsan sheeko this. Waxa xiiso leh, Mail.Ru Group waa fund in halaagsameen iibsato shirkadda la soo dhaafay Durov ee VK.
Fahamka telegraam Open Network
fikrad Durov ee waa in aan bilowno blockchain ah gebi ahaan cusub, isticmaalaya telegraam ee 180 million users sida shidaalka gantaal in uu horay u galay tamarta ansaxinta caadiga off cryptocurrency iyo samaynta telegraam, wax ku ool ah, kingmaker ah cryptocurrencies kale, sababta oo ah qiyaasta jira.
Sida laga soo xigtay warqad cad telegraam in TechCrunch ayaa qaybo ka mid ah dib u eegis, ay cryptocurrency waxaa loogu yeedhi doonaa "Gram" oo laga yaabo inay helaan yaabaa ansaxinta caadiga degdeg ah by la xidhan telegraam ee app chat.
Ilo ku odhan Durov ayaa go'aansaday in la isu geeyo labada kaabayaasha dhexe oo baahsan, tan shabakad gebi baahsan ma qaaddo sida ugu dhakhsaha badan hal taas oo uu leeyahay qaybo ka mid ah dhexe, halkan sababta telegraam baahan yahay in ay leedahay ay blockchain u gaar ah.
U soo guurista boosteejo ah oo blockchain baahsan u gaysan karto laba shimbirrood oo leh hal dhagax for telegraam. Iyo sidoo kale abuurista dhaqaalaha cryptocurrency hirgashay gudaha app, waxa ay sidoo kale waxa ay dahaar lahaa ka dhan ah weerarada iyo eedeymaha ay dawladaha sida Iran, halkaas oo hadda la xisaabay in 40% ee Iran ee gaadiidka internet laakiin waxaa si ku meel gaar xidhmey mida dibad dalka oo ka dhan ah dawladda.
Telegraam ayaa ciyaaray fal miisaamid siyaasadeed oo xasaasi ah in ay isku dayaan iyo hayn dadka isticmaala ay dalka, xiraan channels qaarkood ee ku baaqaya in la ridey xukuumaddii, iyadoo dadka kale u furan.
WeChat Laakiin Iyadoo Crypto
Iyadoo tan, Telegraam looga golleeyahay in lagu horumariyo utility cryptocurrency ku salaysan ka dhigan tahay WeChat, kaas oo magooshay gelin ka sii badan intii app chat ah oo u dhaqmo sida hab lacag default badan ee Shiinaha.
Iyada oo lacagta la si dhakhso ah la samayn karaa in WeChat kala duwan ee adeegyada, nidaamka weli aad dhexe. madal A baahsan sida tan soo bandhigi kartaa ammaan oo dheeraad ah iyo adkeysiga.
Ilaha ayaa sheegaya in telegraam qorshaynayso in ay u ogolaadaan isticmaalayaasha inay qabtaan labada telegraam ee lacagta iyo Fiat lacagta ee jeebka ka socda.
Waxa kale oo jira hannaanka hadda jira sameeysa telegraam wuxuu dhisay oo ku wareegsan, halkaas oo Axe iyo adeegyada waxaa la bixiyaa by horumarinta cid saddexaad. Mar labaad, halkan tan waayeen, in aragtida, underly wax kasta oo sameeysa a keena telegraam.
In a 132 page warqad cad, Telegraam ayaa ku qeexan qorshaha afar-yada a:
"Adeegyada tan" waxay noqon doontaa boosteejo ah oo loogu talagalay adeegyada dhinac saddexaad ee nooc kasta oo awood u smartphone sida interfaces saaxiibtinimo apps baahsan iyo heshiisyada smart.
"DNS tan" waa adeeg loogu talogalay xilsaarayo magacyada aadanaha akhrin xisaabaha, adeegyada qandaraas smart iyo qanjidhada network. Iyada oo DNS Ton, helitaanka adeegyada baahsan ayaa laga yaabaa sida "arkaysid website a on World Wide Web."
"Lacagta tan" waa boosteejo ah oo micropayments iyo network micropayment channel a. Waxay ujeeddadiisu tahay in loo isticmaalo "wareejinta dagdag ah off-silsiladda qiimaha u dhexeeya dadka isticmaala Axe iyo adeegyada kale". Badbaadada dhisay nidaamka waxaa loogu talagalay si loo hubiyo in wareejinta "waa sida aamin ah sida xawaalad on-silsilad".
The "tan Blockchain" ka koobnaan doonaan silsilad Masterka iyo 2-in-the-awood-of-92 blockchains socda. Its arrin inta badan caan ah waa in ay leeyihiin doonaa ah "waynyahay Sharding qaabka" si ay u gaaraan scalability. Sayidka, blockchains tan ujeedadoodu tahay in ay si awood "si toos ah u kala qaybsan tahay oo ku milmaan inay meel isbedel ku load". Tani waxay ka dhigan tahay blocks cusub si degdeg ah ahbaa iyo "maqnaanshaha safaf dhaa-dheer caawinaysaa in macaamil ganacsi qiimihiisu hooseeyo, xataa haddii qaar ka mid ah adeegyada isticmaalaya madal ay noqon ballaaran oo caan ah ".
Waxa kale oo ay ka koobnaan doonaan "Instant Hypercube isdaba" loogu talagalay si blockchain u joogteyn karto xawaaraha ugu sareeya xitaa sida uu korayo. Its caddayn hab saami gaari doonaa afgarad iyada oo kala duwanaansho ah oo ka mid ah 'Byzantine Babaca dulqaad' maamuuska, mar kale sii kordhaya xawaaraha iyo hufnaan. Oo waxay kaloo isticmaali doonaa 2-D ledgerada qeybiyey. Taas macnaheedu waa tan ku koraan blocks cusub sax ah on top of kasta oo blocks in la xaqiijiyey in ay noqon sax ahayn in ay ka fogaadaan wax kasta oo aan loo baahnayn iyo mudacyadii. In si kale loo dhigo, Tan ujeedadeedu tahay in ay noqon 'is-bogsashada'.
qarnigooda saddexaad tan ee blockchain ku salaysnaan doonaa a 'caddeyn saamiga' firfircoon xaqiijisatay by dhinacyada kala duwan leh Heer sare ah ee dulqaad qalad. Waxaa sidoo kale qaban doonaa kaydinta ID, lacagaha iyo heshiisyada smart. Sidaas, halkii ay ku tiirsan caddeynta shaqada si ay u abuuraan ay lacagta, Telegraam ku tiirsanaan doonaa cusub a, Jidka tamar-qabsanaya jidka yar ee cryptocurrency macdanta badan hab asalka Seeraar.
codsigaaga waa inay noqon doonto awood u tiro si weyn u xoogbadan, macaamil, ku dhowaad 1 million per labaad. In si kale loo dhigo, oo la mid ah dhulka la dhigin ee mashruuca Polkadot ka soo Berlin - laakiin saldhig ku rakiban ee 180 milyan oo qof. Tani waxa ay la 'interchain' la-ka loo yaqaan 'sharding firfircoon' ka dhigaysa.
Wargeyska ayaa sidoo kale cad cad in boqolkiiba afar ka mid ah sahayda ee Grams (200 million Grams) loo hayo doonaa kooxda horumarinta telegraam ee la muddo awoodda afar sanno ah. Telegraam ayaa sidoo kale qorshaynaysa in ay sii haystaan ​​"ugu yaraan 52 boqolkiiba "ee sahayda oo dhan cryptocurrency Grams in ay ka ganacsiga kuteen ilaaliyo iyo joogteynta dabacsanaan. The haray 44 boqolkiiba la iibin doono labada iibinta dadweynaha iyo kuwa gaarka.
Lacagta lagu qori doonaa on dhaafsi dibadda iyo gudaha loo isticmaalo app telegraam ah.
Waqtiga falsan, bilood ee hore ee sanadkan arki doonaa olole caalami ah oo ID telegraam Dibadda Secure, raacay by MVP ah oo tan. Daah-of Salada telegraam ah sida qorshuhu yahay Q4 2018, iyo abuurista dhaqaalaha tan ku salaysan ku bilaabi kartaa in Q1 2019. Inta kale ee Adeegyada tan ku raaci lahaa in Q2 2019.
Qaar ka mid ah in beesha crypto sii walaacsan Ton. "Waxaan u malaynayaa in tani ay tahay sida CEO ee monetizing telegraam, asal ahaan,"Ayuu yiri Jackson Palmer, aasaasihii cryptocurrency hore Dogecoin.
Hillaac Shaybaarka abuurtaa a "munaaradda" si niyad hillaac-fiisa.
Fikradda ah Pr ah ...
Rakuten bilawday ay cryptocurrency u gaar ah
In 2016, Japanes ah ...
Post Previous:Blockchain News 8 January 2018
Post Next:Blockchain News 9 January 2018